Chido ndicho chikonzero chekuberekwa nekufa, uye rufu nekuzvarwa,
Asi mushure mehupenyu huzhinji, apo pfungwa dzakakunda chido,
Chido chisina chakanaka, kuzviziva, Mwari akamutswa achati:
Ndakaberekwa kubva pachizvaro chako cherufu nerima, o chido, ini ndakabatana
Iyo isingafi inopinda.
Vol. 2 NOVEMBER, 1905. Nha. 2
PAMWE masimba ayo mafungiro evanhu anofanira kukwikwidza, chido ndicho chinotyisa kwazvo, chinonyengera, chinonyanya kuipa, uye chinonyanya kukosha.
Apo pfungwa yekutanga inotanga kuiswa mumuviri iyo inotya uye inodzvinyirirwa nehupenyu hwechido, asi kuburikidza neshamwari iyo kukanganisa kunova kunakidza, kusvikira pfungwa inopedzisira ichinyengedzwa uye yakasvibiswa mukukanganwa nezvinofadza zvinonakidza. Nengozi ndeyokuti kuburikidza nekuchiva kwega pachake pfungwa inogona kumira nechishuvo chakareba kwenguva yakareba kupfuura iyo inofanirwa, kana inogona kusarudza kuzviratidza nayo, uye saka dzokera kurima neruchiva. Zvakakosha kuti chido chinofanira kupa kupikisa mupfungwa, kuti nokuona kuburikidza nemafungiro ayo pfungwa ichazviziva pachayo.
Chido ndiro simba rokuvata mupfungwa dzepasi rose. Nekutsvaga kwekutanga kwefungwa dzese, chido chinomutsa kuita basa maviramu ezvinhu zvose zviripo. Apo unobatwa ne mweya wepfungwa unoshuva unomutswa kubva muhutano hwahwo uye hunopoteredza uye hunozara nezvinhu zvose.
Chido mapofu uye matsi. Haikwanise kunora, kana kunhuwa, kana kubata. Kunyangwe chido chisina njere, asi chinoshandisa pfungwa dzekuzvishumira pachako. Kunyange zvazvo riri bofu, rinosvika kuburikidza neziso, rinopinda uye rinoshuva mushure memavara nemafomu. Kunyange zvazvo matsi, inoteerera uye inonwa mukati mezeve nzeve iyo inokurudzira kunzwa. Pasina kunwa, asi inonzwa nzara, uye inofadza kuburikidza nehutano. Pasina kunhuhwira, asi kuburikidza nemumhino iyo inhales zvinonhuwira zvinokurudzira kuda kwayo.
Chido chiripo pane zvinhu zvose zviripo, asi zvinosvika pakuzara uye kwakakwana kutaura chete kuburikidza nehupenyu hwehupenyu hwemhuka. Uye chido chinogona kungosangana chete, chizive, uye chinotungamirirwa kunoshandiswa kupfuura chikara apo chiri mumhuka yaro yemhuka mudumbu remhuka yevanhu.
Chido chinhu chisingagoneki chinopisa chinokonzera kugara nekuenda kwekufema nguva dzose. Chido ndicho chamupupuri chinogona kutora upenyu hwose huri mawo. Pasina fomu, chido chinopinda uye chinopedza marudzi ose nemafungiro ayo anoramba achichinja. Chido ndechuputi yakadzika-yakagara muzvikamu zvepabonde; zvidzidzo zvaro zvinosvika kunze kwezvikamu zvemazwi mukati megungwa rehupenyu uye kushumira kune zvisingamboiti-ku-zvinogutsikana; chinopisa, chinopisa, moto, chinoputira muzvido zvayo uye kuchiva, uye maddens zvishuvo uye vavariro, nehupo hupenzi hwevampire iyo inobvisa simba remuviri iwoyo umo nzara yaro inofadza, uye inosiya unhu hwacho hunopisa kunze cinder pane gurupu repasi. Chido chinhu chisingaoneki chinokonzera, chinoputika uye chinoputika, uye rufu kune vose vasingagoni kuramba varipo, vachichinjira muzivo, uye vanoipedzisira vachida. Chido ichocho chinokonzera kufunga kwose pamusoro payo uye kunomanikidza kuti ipe nziyo itsva yekutamba kwemazwi, maitiro matsva nezvimwe zvinhu zvekugara, zvigadzirwa zvitsva uye zvido zvekugutsa zvido uye kuomesa pfungwa, uye chinangwa chitsva chekutora unhu uye hunyengera kune kuzvikudza kwayo. Chido chirwere chinokura kubva, chinodya mukati, uye chinowedzera mupfungwa; kupinda mukati mezviito zvaro zvose zvakakonzera kufadza uye zvakakonzera pfungwa kufunga pamusoro payo sekusingaparadzaniswa kana kuti kuiona nevanahf.
Asi chido ndicho simba rinokonzera chimiro kubereka nekuunza zvinhu zvose. Pasina kuda kuti zvepabonde zvingaramba kutora uye kubereka marudzi avo, uye kufema uye pfungwa hazvigoni kuitika; pasina kuda kuti marudzi ose aizorasikirwa nemasimba avo anoyevedza ezvisikwa, aizoputsika muguruva uye aparadzwe, uye hupenyu uye pfungwa dzaisazogadziriswa kuti zvizogadziriswa uye zvigadziriswe uye zvichinje; pasina kuda upenyu upenyu hwakanga husingagoni kupindura kufema uye kukura uye kukura, uye kusava nezvinhu zvingashanda kufunga kuti zvingasimisa basa rayo, zvinogumira kuita uye kusiya mupfungwa zvisiri izvo zvisingabviri. Pasina kuda kuti kufema kwaisazoita kuti nyaya ione, zvisikwa uye nyeredzi zvingaputsika ndokudzoka kune chimwe chinhu chinokosha, uye pfungwa ingadai isina kuzviwana iyo pachayo isati yasati yasvika.
Pfungwa ine munhu oga asi chido hachina. Pfungwa uye chido zvinobva mumudzi iwochete uye zvinhu, asi pfungwa ndeimwe nguva yekushanduka-shanduka zvisati zvaitika kuda. Nokuti chido naizvozvo chinopindirana nemafungiro ine simba rekukwevera, kuchinja uye kunyengedza pfungwa mukutenda kuti ivo vakafanana. Pfungwa haigoni kuita pasina chido, uye haingafariri kuita pasina pfungwa. Chido hachikwanisi kuurayiwa nepfungwa, asi pfungwa dzinogona kusimudzira chido kubva pasi kusvika kune mafomu akakwirira. Chido hachikwanisi kufambira mberi pasina rubatsiro rwepfungwa, asi pfungwa haigoni kuzviziva pachayo pasina kuedzwa nechido. Izvo basa rekufunga kumutsa nekuzvigadzirisa chimwe chido, asi sezvo chido chisingazivi uye chiri bofu, kusvibiswa kwaro kunobata pfungwa musungwa kusvikira pfungwa dzichaona kuburikidza nekunyengera uye ichava yakasimba zvokuti inogona kumira uye kukunda chido. Neruzivo iyi pfungwa haisi kungozviona yakasiyana uye yakasunungurwa kubva mukusaziva kwemhuka inoshuva, asi inotangawo mhuka kuchigadzirisa nekufungisisa kubva kune rima ichipinda mundiro yechiedza chevanhu.
Chido chinzvimbo chekufamba kwezvinhu zvakasununguka sezvo ichifema muhupenyu uye inokura kuburikidza nehupamhi hwepamusoro hwepabonde, iyo inosvika pachimiro chechido. Nokufunga zvingave zvadaro zvakaparadzana kubva uye zvichipfuura mhuka, zvibatanidza nemweya wevanhu, nokuchenjera zvinoshanda nesimba rekuda kwaMwari uye pakupedzisira kuva Icho Chinhu Chinoziva.